Nyocha YouTube Channel - YTpals
Chọrọ Enyemaka Ọkachamara YouTube?
Nke a bụ obere ihe atụ nke ọrụ nyocha YouTube anyị…
Nyocha YouTube Channel
Onye ọkachamara YouTube ga-edekọ onwe ya na vidiyo na-enye ọwa YouTube ihe omimi, nyocha 45 + nke ọwa YouTube na vidiyo gị + nyochaa ndị na-asọmpi gị + atụmatụ atụmatụ 5-usoro maka usoro ndị ọzọ.
Zụta ugbu a • $ 120
Ihe nkiri vidiyo gị nke 45 + gụnyere:
Nyocha Ọwa zuru ezu
Ndụmọdụ dị iche iche maka ọwa gị na vidiyo
Nyochaa vidiyo gị & usoro ọdịnaya
Ihe nzuzo iji kwalite vidiyo & nweta ụtụ
Nyochaa ndị na-azọ gị
Zuru ezu 5-Kwụpụ Action Plan maka Gị
Oge nnyefe: ụbọchị 4 ruo 7
Onye ga-azụrụ nyocha YouTube Channel?
You bu obere YouTuber na-agbali imepe owa gi?
Na-anwa ịmatakwu echiche ma ị maghị ihe ị ga-eme?
You nwere ajụjụ gbasara ikpo okwu mana ị maghị onye ọ bụla ị nwere ike ịjụ?
Ọ bụrụ otu a, mgbe ahụ, ọrụ nyocha Ọwa YouTube anyị bụ maka gị.
Ndị ọkachamara anyị bụ YouTubers n'onwe ha, ndị nwere nde YouTube, ihe ruru ndị debanyere aha 1 nde ma na-eke vidiyo vidiyo ọtụtụ afọ.
Ndị ọkachamara anyị maara YouTube n'ime ma ha ga-eso gị kerịta ihe ọmụma ha ka ha na-enyocha ọwa YouTube gị na vidiyo.
Kedu ihe ị ga-enye m ma m zụta ọrụ a?
Anyị ga-eme vidiyo nke 45 + nke anyị nke ọma na-agagharị na ịtụle ọwa YouTube gị. Mgbe ahụ, anyị ga-ebugo ya na YouTube, mee vidiyo ahụ naanị (naanị maka gị) ma zitere gị njikọ ya ka ị wee lelee nyocha gị oge ọ bụla ị nwere ohere!
Mgbe ị debere iwu gị, ọ na-ewe anyị ụbọchị 3-7 iji mezue nyocha Channel gị.
Kedu ihe nyocha so na nyocha Ọwa m?
1) Anyị ga-enyocha vidiyo gị ma nye gị nkatọ na-ewuli elu.
2) Ndụmọdụ maka otu ị ga - esi mee vidiyo gị ka mma ka ọ nwekwuo oge elekere na ijigide ndị na - ege ntị.
3) Anyị ga-enyocha aha gị na thumbnails, atụmatụ ọdịnaya, isiokwu na nkọwapụta, ibe obibi wdg.
4) Anyị ga-ekekọrịta ihe nzuzo anyị gbasara otu esi akwalite vidiyo gị ma nweta ndị debanyere aha.
5) Anyị ga-enyocha ndị asọmpi gị wee gwa gị otu esi adị mma karịa ha.
6) Atụmatụ Nzọụkwụ 5!
You chọrọ nzere nbanye m YouTube channel?
Mba, anyị achọghị nzere nbanye gị. Anyị anaghị abanye na ọwa YouTube gị.
Anyị ga-enye gị vidiyo nkeji iri anọ na anọ + nke anyị na-enyocha ọwa gị nke ọma ma ị nwere ike mejuputa echiche / mgbanwe anyị na-atụ aro maka mma gị.
Nwere ike ịrụ ọrụ na ụdị ọwa YouTube ọ bụla?
Ee! Anyị na-arụ ọrụ na ụdị ọwa YouTube ọ bụla na anyị nwere ike inyere gị aka itolite nke gị, n'agbanyeghị ụdị ọdịnaya gị dị.
You nwere ike ịnye ọwa nyocha ka ọwa ndị na-abụghị Bekee?
Ee! Anyị ga-enyocha ọwa gị na vidiyo ma kwuo okwu Bekee, mana anyị ga-enye ndepụta okwu ntụgharị n'asụsụ ị masịrị gị.
Nke a ga - enyere gị aka ilele vidiyo ahụ, ka ị na-agụ ndepụta okwu iji hụ na ị ghọtara ihe niile anyị na-ekwu.
Sọftụwia ntụgharị anyị na-eji dị mma ma ọ ga-arụ ọrụ dị mma nke ịtụgharị asụsụ ị họọrọ. Ga-aghọta nke ọma ihe anyị na-ekwu na nyocha gị.
Otu esi emeso algọridim YouTube na-egbochi ọdịnaya gị?